KU SAABSAN OPI
WAA MAXAY FARSAMADA
CODSIGII LAGU SAMEEYO
2019 FARXIYA FARXIYA FISKA
MAXAAD KU SAMEEYAA
AMMAANKA SOUTH AMERICA
St.Kitts iyo Nevis
Muuqaalka Suuqa Hanti Malaysiya ee 2020
Malaysia waa mid ka mid ah waddamada shisheeye ee saaxiibtinimada badan ka leeyahay Koonfur Bari Aasiya maalgashadayaasha guryaha. Halkan, waxaad marin u heli kartaa nooc kasta oo nooc hanti ah oo xitaa waad iibsan kartaa dhul shisheeye ah.
Muuqaalka Suuqa Guri ee Filibiin ee sannadka 2020
'Suuqa hantida Philippine ee sannadka 2019, dabacsanaan ayaa noqon doonta magaca ciyaarta.' Isu-duweyaasha Philippines ayaa carabka ku adkeeyay.
Barnaamijka Dhalashada Turkiga
Codsaduhu wuxuu dooran karaa dhowr xulasho maalgashi, oo midkastaaba u qalmo barnaamijka jinsiyadda Turkiga.
Iibsashada Hantida Jabbaan
Iibsiga guryaha ee Japan runtii waa nooc ka mid ah "maalgashi", laakiin dhab ahaan maahan oo keliya macnaha dhaqaale ee erayga. Lahaanshaha hantida waxay saameyn ku yeelan doontaa noloshaada qaab bulsheed, cilmi nafsi iyo qaab dhaqan.
Spain Visa Dahabiga ah
Waxay xaq u leedahay inay degto Spain oo ay ku safarto Yurub.
Barnaamijka Visa Dahabiga ah ee Boortaqiiska
Maalgalinta ay sameeyeen muwaadiniinta reer Brazil ee isla nidaamkaas ku jirtay ayaa kor u kacday 42 boqolkiiba sanadka 2019.
Visa Griiga Dahabka ah
Visa Griiga Dahabka ah maalgashiga, dheefaha iyo sharciga 2019!
Oggolaanshaha Deganaanshaha Joogtada ah ee Qubrus
Si loo helo rukhsad degenaansho rasmi ah, dadka aan daganeyn waa inay soo gudbiyaan foomka dalabka isla markaana ay keenaan caddeyn muujineysa inay iyaga iyo qoysaskooda dhaqaale ahaan isku filan yihiin oo ay si joogto ah ugu sii joogeen Qubrus 5 sano.
Su'aalaha ku saabsan dhacdooyinkayaga, fadlan noogu soo dir emaylkaaga annagana waan la soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
Cinwaanka: 2727, Riverside Avenue, Pudong New District, Shanghai, China